Kafaalo waxay magaalada Gøteborg ee dalka Sweden ku qabatay weekendkii 22 -23 mars 201 shirweyne lagusoo bandhigay daahfurka Kafaalo Magazine 2014 iyo seminaar cinwaankiisu ahaa “sidee u dhisi karnaa una maamuli karnaa shakhsiyaad iyo organisation wanaagsan oo waxtar umadeed leh”
Waxaa shirkaasi kasoo qaybgalay, dad fara badan oo gaaraya 250 ilaa 300 qof oo kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay kamid yihiin aqoonyahanno, masu’uliin iyo dad kaloo kamid ah degaanka magaalada.
Dadwaynaha loosoo bandhigay majalladan ayaan si fiican ula dhacay mawaadiicda uu sanadkan soo qaadatay oo isugu jiray arimaha bulshada, waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, siyaasadda iyo culuumta iyo kuwa kale oo badan.
Sidoo kale waxay Kafaalo seminaar u qabatay dad xul ah oo ku howlan ka shaqaynta ururada bulshada iyo jamciyadaha khayriga. Koorasyadaasi waxay ku saabsanaayeen sidii loo dhisi lahaa ama loosiii adkeyn lahaa fariisinta hab-maamul wanaagsan ee uu lahaan karo urur kashaqaya arimaha bulshada ee kala duwan.
Waxaa kasooqaybgalayaasha oo dhan loo qaybiyey bug lagusoo koobay koorsooyinkii baxay. Buugaasi waxaa loogu magacdaray ”Shakhsiyad Hufan”. Waxaa seminaarkaasi soo jeediyay shaqalaaha hay’adda Kafaalo oo iyaga waxbarasho iyo khibrad dheer u leh ka shaqaynta ururada khayriga ah.
Dadkii kasoo qabgalay waxay halkaasi ay ka korarsadeen cilmi iyo aqoon waxtar leh oo muhim ugu noqon doono howlahooda ka shaqaynta uruda bulshada iyo jamciyaatka khayriga ah.
Hoos waxaa dheehan kartaan sawirada shirweynahaas iyo seminaarka kafaalo.
Tirada Martida: 4716 - Update ugu danbeeyay: 03-04-2014
Kafaalo Conference Sweden
Visits: 698733 | :::::